2013 November : Oromo Democratic Front
Cafaqaan, hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa keessatti baqatoota Oromoo fi lammiiwwan Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru haal duree tokko malee daddaffiin dhabbatuu qaba! Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu Dhiheenya kana hawaasa Oromoo fi Ethiopia, akkasumas hawaasa saboota Afirka fi biyyoota sadaffaa sababa adda addaan biyyaa isaanii irraa ba’anii biyyoota arbaa adda addaa keessa jirtan irra miidhaan sukaneessaan yeroo gara yerootti ga’aa jiru heedduu yaaddessaa ta’ee jira. Keessumaa mootummaan Saudi bifa baqaanis haa ta’u hojii barbaadannaa ykn sababa adda addaan dhaqanii biyya sana keessatti argamn irratti tarkaanfii gara jibinaa inni fudhachaa jiru seera mataa isaa baafatee qabuu kan mirga dhala namaa kabajuufi…
Walgahiin ADO biyya Canada
Posted by ODF on November 14, 2013 · Leave a Comment
Walgahiin ADO biyya Canada magaalaa Edmonton Albertatti waamame milkiin xumuramee jira. Walgahiin ADO Sadaasa 9, 2013 marsaa ADO magaala Edmontoniin qindaawe qophaawe akeeka waamameef bakkaan gahuun xumuramee jiraachuu oduun achirraa madde mirkaneessee jira. Walgahiin ADO kun dhimmi inni irratti xiyyeeffate Oromoota magaalaa Edmontn fi naannawaa ishee jiraatan walitti fiduun bu’uureffama ADO dhuma Bitootessaa irraa eegalee hanga ammaatti dalagalee raawwataman ummataa fi deggertootaaf ibsuuf kan xiyyeeffate ture. Bakka bu’aan marsaa ADO magaalaa Edmonton O/Elemoo Odaa simannaa keessaummootaaf godhanii jiru. Haasaa simannaa isaanitti dabalee sirna walgahiin guyyaa sanaa itti geggeffamu ibsuun, namni hunduu (kan dubbatuus kan dhaggeeffatuus) mirga wal qixatti qabaachuu fi…
Posted by ODF on November 8, 2013 · Leave a Comment
Come back soon for more upcoming events….
RBO – October 2013
Posted by ODF on November 6, 2013 · Leave a Comment
Here you will find Radio Bilisummaa Oromoo programing for the month of October 2013.
Mata duree knaa nama gubbaa irra laaluuf jechoonni tokkummaa fi qabsoo jedhan jechoota waliif faallaa fakkaatu. Garuu nama gadi-faggeessee xiinxallee fi akkaataa sabootaa fi ummatoonni addunyaa itti jiraatanii guddatan hubateef tokkummaa fi qabsoon walii faallaa osoo hintayin tasumayyuu walkeessatti ykn walii wajjin jiraatan hubata. Tokkummaa fi qabsoon walmalee hinjiraatan. Sabni tokkos yoo tokkummaa hinqabaatin akka sabaatti jiraachuu hindanda’u. Akkasumas tokkummaa keessatti qabsoon yoo hinjiraatin guddatee fuulduratti warraaquu ykn tarkaanfachuu hindanda’u. Kana jechuun tokkummaan madda jireenna saba tokkoo yoo ta’u qabsoon ammoo madda guddinnaati. Saba tokko akka sabaatti jiraachisuu fi guddisuun karaa filmaata biraa hinqabne tawuu isaa qabsaa’otaa fi jaarmayoonni Oromoo…